Ikhaya » izithuba » Ukhuseleko loKhenketho noNgxamiseko » Amasela aseAfrika ahlasela iinqanawa kunye nabasebenzi baseRussia, bathimba oomatiloshe abathandathu
Iindaba zokuhamba eBenin • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Safety • Ubunqolobi kunye nolwaphulo-mthetho kubahambi: • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel
Amasela aseAfrika ahlasela iinqanawa kunye nabasebenzi baseRussia, bathimba oomatiloshe abathandathu
Abaphangi bahlasela inqanawa eneeflegi zePanama iMSC Mandy kunye nabasebenzi baseRussia kunxweme lwaseBenin eNtshona Afrika.
Ngokwe-arhente yaseRussia yezolwandle kunye noMlambo wezoThutho kunye nomzi wommeli waseRussia eBenin, oomatiloshe abathandathu bathinjwa.
Iqela labahlaseli abasixhenxe ukuya kwasithoba, bexhobe ngemipu kunye neebhleyidi bangena kwiMSC Mandy, baphanga inqanawe kangangeeyure ezimbini ngaphambi kokuba bemke bathabathe oomatiloshe abathandathu ababekhwele nabo.
Kwakukho amaRashiya angama-23 kunye nomnye waseUkraine phakathi kwamalungu abasebenzi, ngokwegunya laselwandle laseRussia. Umzi wozakuzo, ecaphula uMkhosi wamanzi waseBenin, uthi bekukho abantu abangama-26: amaRashiya angama-20, amaUkraine amane kunye namaGeorgia amabini.
Ukapteni, iqabane lakhe eliphambili kunye neqabane lakhe lesithathu, i-boatswain, i-fitter-welder kunye nompheki, bonke abemi baseRussia, bathinjiwe. Abanye abasebenzi bahlala ngaphakathi bengonzakalanga.
Olu hlaselo luye lwenzeka ezinzulwini zobusuku malunga neekhilomitha ezingama-55 zolwandle ukusuka eCotonou, isixeko esikhulu esisechwebeni esikunxweme olusemazantsi eBenin.
Ukulandela olo hlaselo, i-MSC Mandy yaya kwizibuko laseLagos kwaye kulindeleke ukuba iqhubele phambili ukuya eCotonou, phantsi kweqabane eliyintloko elibambeleyo. Amalungu abasebenzi abambeleyo kulindeleke ukuba ajoyine abanye oomatiloshe eCotonou.
Inqanawa ngoku ibotshelelwe kwiGulf of Guinea, ngokweMarinetraffic.
Ummandla ongaselunxwemeni lwaseBenin kunye neNigeria engummelwane uthathwa njengobungozi bamanzi. Kwakukho uhlaselo ezintlanu lwabaphangi kufutshane naseCotonou nangaphezulu kwama-20 kufutshane naseNigeria eLagos kunyaka ophelileyo.
Oonozakuzaku baseRussia eNigeria naseBenin basebenzela ukukhulula oomatiloshe ababanjiweyo, i-RIA Novosti ibike. Akukho zimfuno zenziweyo ukuza kuthi ga ngoku.